Mogadishu Journal » Barcelona oo u dhaqaaqeysa saxiixa laacib ka tirsan Chelsea
Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay dooneysaa inay lasoo saxiixato difaaca Chelsea gadoodka ka ah ee Andreas Christensen marka uu furmo suuqa January.
Sida uu daabacay wargeyska Sport ee kasoo baxa Spain, Barca ayaa diyaar u ah in laacibkan ay u dhaqaaqaan saxiixiisa marka la gaaro suuqa jiilaalka.
Kooxda reer Catalan ayaa waxa ay aad u baadi goobeysaa difaac beddel u noqday xiddiggooda Samuel Umtiti, kaasoo dhaawac dheer ku maqnaan doona.
Horraan ayay Barcelona isugu dayday saxiixa difaaca reer Denmark iyadoo wada hadalladii ugu horreeyay ee ay labada kooxood wada yeesheen uu ku idlaaday guuldarro, maadaama Blues ay ku gacan seertay dalabkii koowaad ee Barca.
Difaaca kooxda Ajax ayaa ka mid ah xiddigaha difaaca ka ciyaara ee ay Barcelona dooneyso, balse loollankiisa waxa uu u muuqdaa mid ay Juventus ku guuleysan karto.
Christansen ayaa waxa uu noday dookha saddexaad ee difaaca Chelsea tan iyo markii Maurizio Sarri loo magacaabay macallinka kooxda Chelsea.